I-Gmail iphutha lokukhwabanisa likhohlisa ngisho namakhasimende anolwazi ITS
19 uJan 2017
Ukwehla kobugebengu be-phishing kuyinto uhlelo oluhlakaniphile kakhulu. Ukuhlukunyezwa noma iklayenti le-Gmail kuzothola kuqala i-imeyili kusuka kulokho iklayenti ibona ukuthi isithembekile oxhumana naye. Ukufakwa ku-imeyili yinto enayo yonke into ephawulekayo yokurekhoda ejwayelekile kumklamo we-.pdf. Amaklayenti asolisayo ane-propensity yokulanda uxhumano uzothola okuthile okungahlosiwe okubonakala emgqeni olandelayo.
Ukuthinta insimu engobo yomlando ingxenye enkulu kunika amaklayenti ukubuyekeza umbiko. Ukuthelela kulolu xhumano ngaphandle kwalokho, kuzokungena ngemvume ngemvume ngekhasi le-Google ukuze ufike ku-archive. Amakhasimende angenayo i-ID azofaka i-ID yabo ye-imeyili kanye nekhiye yangasese bese uqhubeka.
Idatha ye-Gmail ye-URI
Imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo ukuhlukanisa
Ngesikhathi lapho iklayenti ichofoza lokho akushoyo ukuthi uxhumano nokubuyekezwa kombiko ku-imeyili, ivula idokhumenti kwelinye ithebhu (ngokuphindaphindiwe ‘Sign in with Google page’) kuphela ukuthi leli liyiqiniso futhi lithumela imininingwane yakho kumuntu ohlukumezayo.
Uma kungenzeka ukuthi usalokhu ucwaninga, ibhulogi ibonisa ukuthi ungaya ku-haveibeenpwned.com bese uhlola nge-imeyili yakho kule sayithi enokwethenjelwa.
Ngabe izinga lobugebengu bubekwe ngaphi lapho?
Ngokusho kwephuzu lephuzu le-blog yi-CEO ye-WordFence uMark Maunder, lokhu kuhlaselwa kubalwe esikhathini samasonto amuva nje. Yini okucindezelayo ukuthi kuye kwabalwa ukuthi akuyona iklayenti eyisisekelo, kodwa kunalokho okukhethekile noma ukuhlangabezana namakhasimende akhononda ngokushaywa yilo. Iqiniso litsheliwe, kuncane kakhulu ngisho ne-Google engayenza ukulwa nokuhlaselwa okunjalo njengoba isimemezelo esivela ku-Google sikhuphukile:
Ungazivikela kanjani ekuhlaselweni okunjalo?
Uma kwenzeka ucabanga ukuthi uyingozi, into engcono kakhulu okumele uyenze ishintshe ukhiye wakho wemfihlo, lokhu kunikezwa umhlukumezi unalokhu engakugcinanga erekhodi lakho ngokwenza okufanayo kusukela ekupheleni kwakhe. Ungenza ibhokisini yelogi lakho lokubhala irekhodi ukuze ubone ukuthi ngabe omunye umuntu umakwe kumlando wakho. Ungakwenza lokhu ngokuvula irekhodi lakho le-Gmail futhi ngemuva kwalokho kwesokudla kwesokudla, thepha ku-Imininingwane.
Njengoba i-Google idinga ukunakekelwa, indlela enhle kunazo zonke yokuhlala iphephile ngokuthembekile, ukunika amandla ukuqinisekiswa kwesigaba ezimbili noma ukuhlola ukuphepha okurekhodiwe okungeziwe.